ETH na BTC na-egosi ala - CoinWorldMap
ETH na BTC na-egosi akara ala
Mee 8, 2022 Bitcoin, Ethereum, Nft
N'agbanyeghị ihe mgbaàmà nke mgbake na Wednesday na-esonụ Fed si ọnụego ibugo, Ethereum (ETH), tinyere Bitcoin (BTC) na ndị ọzọ cryptocurrencies, dara Thursday na kpochapụwo "ịzụta asịrị, na-ere akụkọ" ejiji, na-aga n'ihu a adịkwa ogologo ogologo nke nwere. kpuchie ahịa crypto niile. malite na ngwụcha Maachị.
N'oge ederede, ETH na-ere ahịa na $ 2556, 47% n'okpuru oge ọ bụla. Bitcoin gbadara na $ 34, gbadaa 644% site na ATH, ọbụlagodi ka ndị ahịa na-agbasi mbọ ike ịchọta ebe mgbaba ọzọ. Otú ọ dị, n'agbanyeghị na ọnụahịa ahụ na-eleghara ọkwa nkwado isi, ndị ọkachamara achọpụtala ihe ngosi dị iche iche na agbụ nke nwere ike ikpebi maka mgbanwe ọnụahịa.
Azụmahịa ETH na-arị elu
Na Satọde Santiment na-akọ na Ethereum dekọrọ ọtụtụ azụmahịa dị ka ọnụ ahịa dara n'akụkụ njedebe nke izu. Dị ka ha si kwuo, nke a mere nke mbụ n'ime ihe karịrị afọ atọ.
"E nwere ihe dị ka ugboro 3,4 karịa azụmahịa na netwọk Ethereum, ebe mkpụrụ ego na-efunahụ ma e jiri ya tụnyere uru na Friday. Nke a bụ ụbọchị kachasị elu n'ihe gbasara ọnụ ọgụgụ isi ETH kemgbe Nọvemba 18, 2018, ma ọ bụ afọ 3,5 gara aga, "ụlọ ọrụ nyocha tweeted.
Na Fraịde, ụlọ ọrụ ahụ dekwara: "Ụnyaahụ, enwere adreesị ozi dị nde 1,17 pụrụ iche na netwọk Bitcoin na-eme azụmahịa, ọrụ kachasị elu kemgbe Disemba 2, 2021."
N'ịtụle ihe ndị ọzọ dị ka azụmahịa ETH na-arị elu n'ihi mints Nft, mmụba nke azụmahịa na netwọk abụọ ahụ, karịsịa n'oge ọdịda, bụ n'ihi na ụlọ ọrụ na-anakọta ego ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na mkpụrụ ego ma ọ bụ stablecoins ezigara na mgbanwe na-ejikọta ya na ire ere, n'ọtụtụ ọnọdụ n'oge ntinye, dị ka nke ugbu a, nwere ike ịpụta na òtù dị iche iche chọrọ ịkwanye akpa ha.
BTC na ETH whale na-azụ ahịa nke ọma
N'ime ọnwa atọ gara aga ma ọ bụ karịa, whale nke BTC na ETH zụrụ nke ọma, na-eji ọdịda ọ bụla dị ịrịba ama mejupụta akụ ya, ZyCrypto kọrọ. N'ụzọ na-akpali mmasị, ọnụ ọgụgụ nke obere whales amụbaala nke ukwuu kemgbe June gara aga, ọnụ ọgụgụ ndị hodler na-ejikwa ụzọ mgbago ugwu.
Mmiri mmiri na nso nso a, na mgbakwunye na nke Tọzdee, ka ahụkwara na ọ na-ebute ụzọ mgba oke ehi siri ike. Enwere ike ịhụ mmiri mmiri ahụ dị ka "ahịa onyinyo" maka ndị na-azụ ahịa na-achọ iji ohere ịzụta ihe onwunwe crypto na ọnụ ala dị ala.
Teknụzụ, ọ bụrụ na Ethereum efunahụ "obere nkwado" ugbu a, ọnụahịa ahụ ga-achọ nkwado $ 2400. Ọ bụrụ na ọ daa n'ihu, ọ nwere ike ịdaba na Jenụwarị dị ala nke $2200. N'aka nke ọzọ, Bitcoin nwere ike ịdaba na $ 31 tupu ịkụ ala June nke $ 000, mpaghara inflection na-achọsi ike.
Google-Cloud ga-achịkọta ndị otu Web3
Nzụta Terra metụtara ọnụ ahịa Bitcoin